Chelsea, Barca Iyo Man United Oo Badiyay, Juventus Oo Lagu Dhegay Iyo Bayern Munich Oo La Tumay. - jornalizem
Chelsea, Barca Iyo Man United Oo Badiyay, Juventus Oo Lagu Dhegay Iyo Bayern Munich Oo La Tumay.
Chelsea ayaa guul fudud ka gaartay kooxda reer Denmark ee FC Nordsjælland, ka dib markii ay 4-0 ku xaaqeen kulan ka dhacaya Copenhagen.
Chelsea ayaa iska caabin badan oo ay la kulantay ka dib waxa ay hogaanka ciyaarta u qabatay daqiiqadii 33aad markii Adu uu kubad dhumiyay, islamarkaana Torres iyo Lampard ay u shaqeeyeen Mata kaasoo si qatar ah u dhameystiray.
Goolkaas uu dhaliyay ciyaaryahanka reer Spain ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan David Luiz ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxda difaacaneysa koobka ee Chelsea markii laad xor ah oo loo dhigay uu sideeda shabaqa ku geliyay daqiiqadii 79aad ee ciyaarta.
Juan Mata ayaana u seddexeeyay Chelsea daqiiqadii 81aad, waana goolkiisii labaad ee ciyaarta, isagoo ciyaarta ka dhigay 3-0.
Xiddiga reer Brazil Ramires ayaa isna ka qeyb qaatay goolasha ku socday shabaqa kooxda FC Nordsjælland, waxaana dhismaha goolka afaraad ee Chelsea ka qeyb qaatay Oscar.
Chelsea ayaa guushaan waxa ay ka saacideysaa inay wadada saxda ah u korto daafacshada koobkaan iyagoo haatan afar dhibcood ka dib labo kulan oo ay ciyaareen wareega group-yada.
Kooxda Juventus ayaa lagula dhegay garoonkeeda Juventus Stadium ka dib markii ay barbaro 1-1 ah la galeen kooxda reer Ukraine ee Shakhtar Donestk.
Kooxda Shakhtar oo marti loo ahaa ayaana goolka ku hormartay daqiiqadii 23aad markii Texeira uu kubad shabaq ku hubsaday, xilli ay si fiican iskula shaqeeyeen Willian.
Labo daqiiqo ka dib Juventus ayaa ka jawaab celisay Pirlo ayaa dhanka koonerka kubad ka soo dhigay, waxaan shabaqa si farsamo cajiib ah ku hubsaday ciyaaryahan Bonucci.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Qeybtii labaad ayaan ciyaarta wax weyn iska bedelin dhanka natiijada waxaana ay ku soo dhamaatay barbaro 1- 1 ah.
Waa barbarihii labaad oo isku xiga ee Champions League ee kooxda Bianconeri ka dib barbarihii ay bishii hore la galeen Chelsea.
Kooxda BATE ayaa guuldarro lama filaan ah dhabarka u saarisay kooxdii finalka ka soo gaartay koobkaan xilli ciyaareedkii hore Bayern Munich ka dib markii ay ku tumeen 3-1.
Kooxda BATE ayaa iyadana hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 23aad markii uu kubad dabamariyay goolhaye Neuer ciyaaryahan Pavlov, iyadoo kubadaas uu ka soo shaqeeyay Olekhnovich.
Bayern Munich ayaa qeybtii hore iska soo celin weysay goolkaas looga hormaray, waxaana qeybtii hore lagu kala nastay iyadoo BATE ay hogaanka heyso.
Bayern Munich ayaa xaalada ay ku sii xumaatay markii qeybtii labaad ay BATE heshay goolkoodii labaad ee ciyaarta oo uu u dhaliyay Rodionov, taasoo u sahashay inay guusha xaqiijistaan.
Ribery ayaa daqiiqadii 90aad hal gool u soo celiyay kooxda Jarmalka Bayern Munich, lakiin goolkaas waxaa durababa ka jawaabay Renan Bressan oo shabaqa ku hubsaday goolkii 3aad ee BATE.
Bayern oo markii ugu horeysay ku ciyaareysay Champions League Belarus ayaana guuldarro xanuun leh loo soo huwiyay, waana guuldaradoodii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka ee tartan rasmi ah.
Kulanka kale ee Group-kaan kooxda Valencia ayaa 2-0 iyadana ku qaarjisay kooxda Lille ee dalka Faransiiska.
Valencia ayaa sii hagaagsatay rikoorka ay ka heysato kooxaha Faransiiska waxaana goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Jonas.
Barcelona ayaa guushii labaad oo isku xigta ka gaartay wareega group-yada Champions League ka dib markii ay 2-0 ku dubteen kooxda reer Portugal Benfica oo marti loo ahaa.
Barcelona ayaaba bilowgii ciyaarta hogaanka qabatay, iyadoo Alexis Sanchez uu shabaqa soo taabtay daqiiqadii 6aad, waxaana dhismaha goolkaas iska lahaa Lionel Messi.
Ciyaarta oo xiiso laheyd islamarkaana labada kooxood ay isweydaarsadeen fursado qatar ah, ayaa qeybtii hore lagu kala nastay goolkaas uu dhaliyay ciyaaryahanka reer Chile.
Qeybtii labaad daqiiqadii 56aad ayay Barcelona sii dheereysatay hogaankeeda, markii Lionel Messi uu mar kale kubad la soo dhexmaray ciyaartoyda Benfica ka hor inta uusan u dhigin Fabregas kaasoo isna shabaqa ku hubsaday.
Laakiin guusha Barcelona ayaa waxaa hareeyay dhaawac soo gaaray kabtankooda Carles Puyol ciyaarta oo 10 daqiiqo dhiman, isagoo si qaldan dhulka ugu dhacay islamarkaana gacanta ay ka kala wareegatay.
Barcelona ayaa haatan hogaanka Group G ku heysa lix dhibcood, halka Benfica iyo Celtic ay wadaagaan seddex dhibcood ka dib labo kulan oo la ciyaaray.
Waxaana dhamaadkii ciyaarta casaan toos ah oo muran uu ku jiro Barcelona laga siiyay ciyaaryahan Sergio Busquets.
Kulanka kale ee Groupkaan kooxda Celtic ayaa heshay seddexdii dhibic ee ugu horeysay ee Champions League ka dib markii ay 3-2 ku garaaceen kooxda Spartak Moscow kuwaasoo marti loo ahaa islamarkaana casaan laga qaatay qeybtii labaad ee ciyaarta.
Manchester United ayaa sii dheereysatay guulaheeda Champions League ee xilli ciyaareedkan ka dib markii ay 2-1 kaga talaabsadeen kooxda Cluj.
Kooxda reer Romania ee CLUJ ayaa si lama filaan ah hogaanka ciyaarta ku qabatay daqiiqadii 14aad, iyadoo Rafael Bastos uu kubad xagaleysan u geeyay Sougou, kaasoo karoos joog hoose uu dhigay uu shabaqa ku hubsaday Pantelis Kapetanos.
Ciyaaryahan Robin van Persie ayaana goolka looga naxsaday United u barbareeyay daqiiqadii 29aad ee ciyaarta, markii laad xor ah uu soo tuuray Wayne Rooney uu madaxa ku dhuftay.
Waxaana kulankii ka socday Romania qeybtiisa hore uu ku soo idlaaday barbaro 1-1 ah.
Bilowgii qeybta labaad daqiiqadii 49aad ayaa kubad uu dhanka midig ka keenay Rooney, waxaa ka soo daahay Felgueiras taasoo keentay inuu shabaq waardiye la’aan ah ku taabto ciyaaryahan Van Persie oo dhaliyay goolkiisii labaad islamarkaana hogaanka ugu dhiibay Red Devils.
Red Devils ayaana ku badisay 2-1, waxaana ay haatan leeyihiin 6 dhibcood labo kulan oo ay ciyaareen Champions League xilli ciyaareedkan.
Kulanka kale ee Group-kaan Braga ayaa 2-0 ku suuldaartay kooxda Turkiga ee Galatsaray oo marti loo ahaa.